News Collection: कति कमाए मन्त्रीहरूले?
कति कमाए मन्त्रीहरूले?
काठमाडौं । भष्टाचारका विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रूपमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचार डर लाग्दो गरी बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरिरहेकै बेला मन्त्रीहरूले भने आफ्नो सम्पति घटेको विवरण बुझाएर सबैलाई चकित पारेका छन्। नियमअनुसार पाउने तलबभत्ता जोड्दा पनि सम्पति बढ्ने तथ्यमा आँखा चिम्लिएर मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरण हेर्ने हो भने तलबभत्तासमेत लुकाएको प्रस्ट हुन्छ। मन्त्रीको सम्पति विवरण छानबिन गर्ने कानुनको अभाव भएको फाइदा लुट्दै मन्त्रीहरूले सम्पति लुकाएको घटनाले भ्रष्टाचार गर्न चाहने अनय उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत फाइदा पुगेको छ। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित गोष्ठीमा वक्ताहरूले मन्त्रीस्तरमा नै सबैभन्दा धेरै कुरा उठाएका थिए। तर मन्त्रीहरूको पेश गरेको सम्पति विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने नेपालका जस्ता इमान्दार मन्त्री विश्वमै नभएको देखिएको छ। विदेश भ्रमणमा अनाधिकृत ढङ्गले लाखौं रकम सिध्याएकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालादेखि काठतस्करीमा करोडौं कुम्ल्याएका वनमन्त्री दीपक बोहोरासमेत इमान्दार देखिनु आश्चर्यजनक विषय बनेको छ। सम्पति विवरणमै घोटाला गरका मन्त्रीहरूले डेढवर्षे कार्यकालमा कति भ्रष्टाचार गरे होलान् त्यो भने अध्ययनको विषय बनेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलमा एक लाख रूपैयाँको सेयर खरिद गरेबाहेक अरु कुनै सम्पति विवरण बढेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पति नबढे पनि उनको सम्पति भने प्रशस्त देखिन्छ। उनको रौतहटको गौर र चन्द्रनिगाहपुरमा जग्गा र कोटेश्वरमा १ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा रहेको घर रहेको छ। त्यसै गरी ५ तोला सुन, ७ सय ग्राम चाँदी देखिन्छ र विभिन्न बैंकहरूमा १२ लाख ७४ हजार निक्षेप उनको सम्पति विवरणमा देखिएको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पत्नी गायत्री नेपालको नाममा १४ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको सेयर तथा निक्षेप रहेको छ। जनता बैंक र नवयुग सहकारीमा प्रधानमन्त्रीको सेयर रहेको छ। विवरणमा जनाइएअनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वामित्वमा कुनै सवारी साधन रहेको छैन। धनी नेताका रूपमा चिनिएका मधेसी जनाअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छादारको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यो आर्थिक वर्षमा ८ हजार सम्पति घटेको देखिन्छ। यद्यपि उनको नाममा अन्य मन्त्रीको भन्दा धेरै सम्पति रहेको छ। मोरङ र सुनसरीमा उनको ८ विघा जग्गा रहेको छ भने सोही जिल्लामा उनका ५ वटा घर रहेका छन्। उनीसँग ८५ तोला सुन र २ सय ७० तोला चाँदी छ। सवारी साधनमा पनि उनी धनी छन्। उनको नाममा २ वटा कार र १ वट जिप छ भने व्यवसायी रत्नबहादुर श्रेष्ठसँगको साझेदारीमा बैंकबाट ऋण लिई व्यावसायिक रूपमा तीन वटा ट्रक संचालन गरेका छन्। श्रीमती निर्मला गच्छादारको नाममा विभिन्न बैंकहरूमा १२ लाख नगद र माछापुच्छ्रे बैंकमा १ सय कित्ता सेयर रहेको छ। सम्पतिको विवरणमा मन्त्री गच्छादारले १ थान भरुवा बन्दुक र १ थान बाह्रबोरको बन्दुकसमेत उल्लेख गरेका छन्। खर्चालु मन्त्रीका रूपमा चिनिने उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले मोरङमा रहेको पुर्ख्यौली घरजजग्गा र एउटा गाडीबाहेक आफ्नो कुनै सम्पति नभएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले दिएको विवरणअनुसार विराटनगरका १८ स्थानमा उनको नाममा करिब २० बिघा जमिन देखिन्छ। त्यसैगरी सिद्धार्थ बैंकबाट ऋण लिएर उनले इन्डियन इस्कोर्पियो गाडी किनेकी छिन्। एक वर्ष अघिको सम्पति विवरणमा उनले १० तोला सुन, ३० तोला चाँदी र १० लाख नगद रहेको विवरण खुलाए पनि यस वर्ष सुन चाँदी लुकाएकी छन्। सबैभन्दा धनी र वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रीका रूपमा चिनिएका वन तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक बोहोराको पनि सम्पतिमा कुनै हेरफेर भएको देखिँदैन। उनको नाममा गत वर्ष जस्तै १ सय २० तोला गरगहना, तीन वटा हिराको गहना र करिब ५ सय तोला चाँदी रहेको छ। उनको नाममा काठमाडौंमा २ वटा पक्की घर र ३ रोपनी जग्गा, ललितपुरमा ११ रोपनी जग्गा र रूपन्देहीमा १० बिघा जग्गा रहेको देखिन्छ। बैंक अफ काठमाडौंमा मन्त्री बोहोराको ३७ हजार ६ सय ७४ कित्ता सेयर रहेको छ भने स्मार्ट च्वाइस कम्पनीमा १ लाख ५५ हजार कित्ता र डीबी एसोसिएटमा १ लाख ९० हजार कित्ता सेयर छ। त्रिशक्ति पोलिफार्ममा, पवन गु्रप सेक्युरिटी र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाललगायतका कम्पनीमा पनि उनको लगानी रहेको छ। उनको नाममा कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र क्लिन इनर्जी बैंकमा १ करोड २० लाख नगद रहेको देखिन्छ भने कुमारी, किष्ट, इन्भेष्टमेन्ट र क्लिन इनर्जी बैंकमा गरी उनको करिब ४ करोड ऋण रहेको छ। जग्गा किन्न र व्यवसाय गर्न उक्त ऋण लिएको मन्त्री बाहोराले उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष उनको ऋण करिब १० करोड रहेको थियो। तर एक वर्षमा नै उनले व्यावसायिक नाफाबाट ६ करोड ऋण घटाएको बताएका छन्। टोयटा र हुन्डाई गरी उनीसँग दुईवटा निजी गाडी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बोहोरा मन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा बदनाम भएका थिए। डीएफओको सरुवा र तराईमा जंगल फँडानीबाट उनले मोटो रकम कमाएको बताइन्छ। सबैभन्दा आकर्षक मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री भीम रावलको भने सम्पति अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै मात्र बढेको छ। उनीसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ लाख २३ हजार नगद रहेकोमा यो वर्ष ३ लाख ९१ हजार पुगेको छ। उनको अन्य पुरानो सम्पतिमा ६ लाखमा किनेको मारुती कार, १५ तोला सुन र ५ तोला चाँदी तथा श्रीमती संजिता रावलको नाममा तीन तले घर र गृहजिल्ला अछामको भागेश्वरमा ३६ रोपनी जग्गा रहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले गृह मन्त्रालय निकै आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छ तर पनि उनको सम्पति उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने मन्त्री भएपछि मनमोहन सहकारी र टुरिजम बैंकमा सेयर लगानी गरेका छन्। टुरिजम विकास बैंकमा ५ लाख र मनमोहन सहकारी तथा अस्पतालमा १ लाख ११ हजार सेयर लगानी गरेको उनले आफ्नो सम्पति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। चितवन नर्सिङ कलेजमा उनको पुरानै ८ लाख ५० हजार रूपैयाँको सेयर रहेको छ। चितवन, धादिङ र स्वयम्भुमा उनको घरजग्गा रहेको छ भने नगद सम्पति ८ लाख मात्र रहेको उनले जनाएका छन्। वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा भ्रष्ट व्यक्तिको रूपमा बदनामी कमाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमाकान्त चौधरीले भने मन्त्री भएपछि प्रशस्त सम्पति जोडेका छन्। उनीसँग २५ किलो चाँदी र ६० तोला सुन रहेको छ। उक्त सुनचाँदी विगतमा सांसद र मन्त्री हुँदा प्राप्त रकमबाट कमाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसपटक मन्त्री भएपछि उनले थप १० तोला सुन जोडेका छन्। गृहजिल्ला बारामा उनको २५ बिगाहा जग्गा र ललितपुरमा श्रीमती गायत्रीदेवी थरुनीको नाममा ६ आना जग्गा छ। ललितपुरको जग्गा ससुरालीबाट पाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री भएपछि उनको बैंक ब्यालेन्स पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष उनले ५५ हजार मात्र बैंक ब्यालेन्स रहेको उल्लेख गरेका थिए तर यो वर्ष उक्त ब्यालेन्स बढेर ८ लाख पुगेको छ। तलब भत्ता र वैदेशिक भ्रमणबाट उक्त रकम जम्मा भएको उनको भनाइ छ। उनको सवारीसाधनमा एउटा मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर रहेको उल्लेख छ। अर्काे आकर्षक मन्त्रालय सम्हालेका पर्यटन मन्त्री शरद्सिहं भण्डारीको पनि सम्पति बढेको छैन। बरु उनले पैतृक सम्पतिबाट प्राप्त गरेको भनिएको केही सुनचाँदी भने बेचेको विवरणबाट देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष उनीसँग ७० तोला सुन र ५ सय तोला चाँदी रहेकोमा यो वर्ष ५० तोला सुन र ४ सय तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरिएको छ। घरजग्गामा मन्त्री भण्डारी धनी नै देखिएका छन्। उनको नाममा ललितपुरको भैंसेपाटीमा १ रोपनी १२ आना जग्गामा घर र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा १३ बिगाहा जग्गा रहेको छ। उनले अघिल्लो वर्ष ५ लाख नगद रहेकोमा यो वर्ष ४ लाख ७० हजार मात्र नगद रहेको सम्पति विवरणमा बताएका छन्। होप इन्टरनेशनल कलेज र सोनामाई कर्मर्सियल कम्प्लेक्स बर्दिबासमा छोरी रश्मी र भाइ नवीन सिंहको नाममा सेयर रहेको छ। सनराइज बैंक, लुम्बिनी बैंक र क्रिष्टल फाइनान्समा करिब २ करोड ऋण पनि मन्त्री भण्डारीको नाममा रहेको छ। सवारीमा सांसद सुविधामार्फत प्राप्त गरेको पजेरो मात्र रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको सम्पतिमा खासै फरक आएको देखिँदैन। मन्त्री भण्डारीको नाममा चपली भद्रकालीमा १ रोपनी २ आना जग्ग्ाामा बनेको घर र तीन तोला सुनका गहना रहेका छन्। त्यसैगरी गौतब बुद्ध हाइड्रो प्रालिमा ५ लाख रूपैयाँको सेयर, स्तुपा सहकारीमा छोरी निशाकुसुम भण्डारीको नाममा १ लाख रूपैयाँको सेयर र कृषि विकास बैंकमा ३५ हजार रूपैयाँको सेयर रहेको छ। उनको नाममा गाडी खरिद र घर निर्माणमा २० लाख रूपैयाँ कर्जा रहेको देखिन्छ। अर्का धनी मन्त्री मिनेन्द्र रिजालको सम्पति पनि थोरै मात्र बढेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष उनले १५ लाख रूपैयाँ विभिन्न बैंकमा रहेको बताएका थिए। यो वर्ष उक्त ब्यालेनस बढेर २० लाख पुगेको छ। श्रीमती दुर्गा र छोरा पर्जन्यको नाममा विभिन्न कम्पनीमा मन्त्री रिजालको सेयर रहेको छ। चैतन्य प्रोपर्टीमा १२ लाख, एपेक्स कलेजमा ६ लाख, सरिन भ्याली स्कुलमा ७ लाख ५० हजार, मन्जुश्री इन्भेष्टमेन्ट प्रालिमा १ लाख २५ हजार, युगरथी सहकारीमा १ लाख सेयर उनको नाममा रहेको छ। घरजग्गामा पनि मन्त्री रिजाल धनी छन्। उनको भक्तपुरमा ४ रोपनी, काठमाडौंमा १० आना र मोरङमा १० बिघा जग्गा रहेको छ। सुनचाँदीमा पनि उनी धनी नै छन्। उनीसँग ४० तोला सुन र ४ सय तोला चाँदी रहेका छ। सवारीमा मारुती कारमात्र रहेको उल्लेख गरेका मन्त्री रिजालको करिब ५ लाख नगद बाहेक अरु सम्पति बढेको देखिँदैन। लोकतन्त्र बहालीपछिका तीनै वटा सरकारमा मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका सद्भावना पार्टीका नेता तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतो सुनचाँदीमा अर्का धनी मन्त्री हुन्। उनको ९५ तोला सुन र ३ किलो चाँदी रहेको छ। काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा घर रहेका मन्त्री महतोको सर्लाही र धनुषाका विभिन्न स्थानमा घर रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष उनले करिब १० लाख बैंक ब्यालेन्स देखाएकोमा यो वर्ष उक्ता ब्यालेन्स ३ लाख ५० हजार मात्र रहेको देखाएका छन्। मन्त्री भएपछि काठमाडौंको मच्छेगाउँ र वार्डभञ्ज्याङ गाविसमा गरी उनले ४ रोपनी जग्गा जोडेका छन्। पारिश्रमिक, घर बहाल र संचित रकमबाट उक्त जग्गा खरिद गरेको उनले सम्पति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। गिट्टी निकासीमा व्यवसायीलाई साथ दिएर कमिसन खाएको तथा नेपाल आयल निगम तथा साल्ट्र ट्रेडिङबाट उनले लाखौं कमाएको चर्चा चलेको थियो। ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भने बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै लगानी रहेको छ। बैंक अफ सिटिजनमा ६० लाख, सिद्धार्थ बैंकमा २ लाख, कुमारी बैंकमा १ लाख तथा ग्लोबल कलेज र ज्योमेटि्रक स्कुलमा उनको लगानी रहेको छ। मन्त्री भएपछि उनको बैंक ब्यालेन्ससमेत बढेको छ। यो अघिल्लो वर्ष ६ लाख नगद रहेकोमा यो वर्ष बढेर १० लाख पुगेको छ। सुनचाँदीमा कांग्रेसका अन्य मन्त्रीजस्तै उनी पनि धनी छन्। ३० तोला सुन र १२ सय तोला चाँदी आफूसँग रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौंको बाँसबारी र चपलीमा उनको घरजग्गा र नुवाकोटमा ५० रोपनी पुख्यौली खेत रहेको छ। कांगे्रसका अर्का मन्त्री बालकृष्ण खाँड जग्गाजमिन जोड्न अरुभन्दा अगाडि देखिएका छन्। उनको बुटवल, जनकपुर, सिराहा, ललितपुर र काठमाडौंका विभिन्न २० स्थानमा जग्ग्ाा छ भने रूपन्देहीमा ३ वटा र काठमाडौंमा २ वटा घर रहेका छन्। नेपाल सेयर मार्केट, भुवनेश्वरी मर्चेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, राजधानी ग्याँस, एनसीसी बैंक, नमस्ते नेपाल सञ्चार समूह, कुमारी बैंक, रिलायन्स फाइनान्स र मायादेवी टेक्निकल प्रालि लगायतका कम्पनीहरूमा उनको करिब ६५ लाख रूपैयाँको सेयर रहेको छ। अघिल्लो वर्ष ६ लाख मात्र नगद रहेकोमा यो वर्ष उनको नगद १२ लाख पुगेको छ। ४० तोला सुन र ६० तोला चाँदी रहेको सम्पति विवरणमा उल्लेख गरेका मन्त्री खाँडले अन्य सम्पति नबढेको जनाएका छन्। कांग्रसको तर्फबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेर अनियमितताको कारण बदनाम भएका मन्त्री मोहम्मद अफताव आलमसँग ४२ लाख नगद सम्पति रहेको छ। उक्त रकम निजी गाडी बेचेर र माओवादीले आफ्नो घर जलाएकाले सरकारबाट प्राप्त १५ लाख क्षतिपूर्तिमार्फत पाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ईंटा मिल र राइस मिलमा समेत उनको लगानी छ। वर्तमान मन्त्रीहरूमा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल सबैभन्दा गरिब देखिएका छन्। उनले आफ्नो सम्पति विवरणमा दाङ र काठमाडौंमा घर, ५ तोला सुन र केही नगद मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार शर्मा, शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङ, वातावरण मन्त्री ठाकुर शर्मा, कृषि मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह, बिना विभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सामान्य प्रशासन मन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ, उद्योग मन्त्री महेन्द्र यादव, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, महिला मन्त्री सर्वदेव ओझा, खेलकुद मन्त्री गणेश नेपाली, शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला तथा भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ कसैको पनि अस्वाभाविक रूपमा सम्पति बढेको देखिँदैन। आकर्षक मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार शेर्माले पाँचथरको ११ ठाउँमा करिब ३० रोपनी जग्गा र नर्थ नेपाल टि स्टेटमा २२ लाख सेयरबाहेक अन्य सम्पति नरहेको बताएका छन्। उक्त जग्गा र सेयर पनि अलँैची खेतीबाट प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ। कृषिमन्त्री यादवले तराईमा केही जग्गा, २५ तोला सुन २ सय तोला चाँदी र ८ लाख नगदबाहेक आफूसँग अरु सम्पति नभएको विवरण पेश गरेका छन्। मन्त्री भएपछि पनि उनको सम्पतिमा खासै हेरफेर भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीहरूको सम्पति विवरणमा पनि कुनै उतारचढाप रहेको देखिँदैन। बरु केहीको त मन्त्री भएपछि सम्पति घटेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी मन्त्रीहरूले वास्तविकताभन्दा फरक सम्पति विवरण पेश गर्ने गरेको दाबी गर्छन्। मन्त्रीहरूको सम्पति विवरणको छानबिन नहुने भएकाले मन्त्रीहरूले जथाभावी विवरण भर्ने गरेको उनले बताए। सम्पति छानबिन नगरिने भएकाले मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको सम्पति लुकाउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका एक अधिकारी पनि मन्त्री तथा कर्मचारीको सम्पतिको छड्के जाँच गर्ने व्यवस्था हुुनपर्ने बताउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सीले १० नम्बरमा ३ नम्बरभन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देशका रूपमा लिने गरेको छ। जसमा नेपालले २.२ अंक मात्र प्राप्त गर्यो् भने १ सय ७८ देशमा नेपाल १ सय २६ औं स्थानमा नेपाल परेको थियो। अफ्रिकी देश घानामा मन्त्री तथा कर्मचारीले सम्पति विवरण पेश गर्दा लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराएरमात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कतिपय जानकारहरू नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू भए केही हदसम्म भ्रष्टाचार घट्ने बताउँछन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेल भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनले आफूहरूलाई मन्त्रीको सम्पति छानबिन गर्ने अधिकार नदिएकाले आयोगले मन्त्रीहरूको सम्पति छानबिन गर्न नसक्ने बताए। 'उजुरी नपरी हामीले मन्त्रीहरूको सम्पति छानबिन गर्न सक्दैनौं,' पौडेल भन्छन्, 'छानबिन नगरी मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे नगरेको भन्न सकिन्न।' प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मासिक सेवासुविधा प्रधानमन्त्री तलब ३६९२० पेट्रोल ३ सय ६ लिटर मोबिल वार्षिक ४० लिटर मोबाइल, मसलन्द खर्च १५ हजार उपप्रधानमन्त्री तलब ३१००० पेट्रोल मासिक २ सय ३८ लिटर मोविल वाष्र्िाक २० लिटर मोबाइल मसलन्द खर्च ७ हजार मन्त्री तलब २८ हजार ९ सय २० पेट्रोल मासिक २ सय ७ लिटर मोविल वार्षिक २० लिटर मोबाइल, मसलन्द खर्च ६ हजार ५ सय राज्यमन्त्री तलब २७ हजार ३ सय ६० पेट्रोल मासिक १ सय ८० लिटर मोविल वाष्र्िाक २० लिटर मोबाइल मसलन्द मासिक खर्च ६ हजार सहायकमन्त्री तलब २६ हजार ७ सय ३० पेट्रोल १ सय ८० लिटर मोविल २० लिटर मोबाइल मसलन्द खर्च ५ हजार ५ सय (साथै दैनिक ७ सय ५० भ्रमण भत्ता, बिल अनुसारको भ्रमण खर्च, निवास खर्च र आवश्यकताअनुसार पीए तथा सल्लाहकारको सुविधा पनि सबैले पाउँदछन्)